सुरु बगैचा बगैचा आराम Carts
2 यो के हो - कार्ट?
3 कार्ट भेरिएन्टहरू
4 बगैचाको लागि कार्ट
5 भारी शुल्क ट्रली
6 वैगनका लागि तह
7 Bollerwagen छत या छत संग
8 परीक्षणमा बोल्लरभेन
9 डिलिवरी र एक कार्टको विधान
10 कारहरूको मूल्य-प्रदर्शन अनुपात
11 सुरक्षा र कार्ट को प्रयोग को आसानी
12 एक कार्टको फाइदा
13 कार्टको हानि
14 बोल्लरभेन-परम्परा बनाइने सुपर कार
15 क्यार्ट खरीद गर्दा के तपाईलाई हेर्नु हुन्छ?
16 केहि कार्टको छोटो चित्र
17 यी निर्माताहरू उनीहरूको बुलोजोजर कारहरूको लागि जान्छन्
18 वैगनको इतिहास
19 केडीईको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
शब्द Carts सम्भवतः हामीमध्ये धेरैजना हर्षित व्यक्तिहरू छन् जसले पिताको दिनमा आफ्नो पेयहरू ट्रांसफर गर्छन्। तर वास्तवमा यो हो Carts, यो विशेष हात कार, धेरै अवसरको लागि एक आदर्श वाहन।
किनभने न्यूनटिक टायरको साथ सानो हात कार आज पनि संसारका थुप्रै भागहरूमा ढुवानीको लोकप्रिय माध्यम हो, केवल क्यानाडाको बारेमा सोच्नुहोस् जहाँ कार ट्राफिक निषेधित छ। बच्चाहरु को क्षेत्र मा वाहन मा खींचने को लागि र लोड वाहक को रूप मा खींचना प्यार गर्दछ, त्यो अझै पनि देश मा लोकप्रिय छ। यसकारण पर्याप्त, त्यसकारण Carts अझ नजिकको हेर्नको लागी।
त्यो के हो - ए Carts?
der Carts एक हात कार हो - तर धेरै ठूलो संस्करणमा छैन र न्यूमेटिकमा, धेरै सजिलो पाङ्ग्राहरू छन्, जस्तै कि एक साधारण काठको हैंडकार्टमा। यो सबैको वरिपरि बन्द हुन्छ, सामान्यतया काठको बनाइएको छ र एक ड्रारबारको माध्यमबाट टाढैमा टाँसिएको हुन सक्छ, प्रत्येक दुई एक पाङ्ग्राहरू एक अक्षसँग जोडिएको छ, त्यसैले तिनीहरू केवल एकै दिशामा मात्र सारिन्छन्।
डामर जस्तै सीधा मैदानमा त्यस्तो हुन सक्छ Carts अत्यन्तै सजिलो छ, जसले भारी भारको यातायातलाई पनि अनुमति दिन्छ। तर भू-भागमा पनि उहाँले आफ्नो हावाको पकाउने माध्यमबाट समक्ष गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाको वासस्थानको समान, बालबालिकाहरू प्राय: भ्रमणहरूमा ढुवानी गरिन्छ, जुन विशेष खुशी हो। बीचमा त्यहाँ छ Carts regular "excursion variations" मा, छत संग।
यस बीच क्लासिक Carts छ, वर्णन को रूप मा, काठ देखि बनाएको छ। तर अहिले त्यहाँ भिन्नताहरू छन्:
der Carts बगैचाको लागि
यस प्रकार, उदाहरणका लागि, बगैचा कार्ट को रूपमा, जसमा एक फ्रेम हो जसमा एक किसिमको बगैचा बैग जोडिएको छ। यसैले, गाडी हल्का र आदर्श मा हरी कट आदि को परिवहन गर्न उपयुक्त छ। थलो हटाउन सकिन्छ र ठोस कार भन्दा बढी सजिलै सफा गर्न सकिन्छ। यी बगैचाको केही मोडेल-Carts ट्रेलरहरू पनि साना ट्रक्टर वा रासर्सका लागि अनुमति दिन्छन्। तिनीहरू मैन्युअल अपरेसन र वाहन ट्रेलरको एक आदर्श संयोजन हुन्।
Carts भारी भारका लागि
मर्न Carts विशेष गरी भारी भारको लागि, स्थिर लोहा ट्यूब ग्रिडले लुटपाट गरेको छ। लोडसेडिङ र अनलोड गर्ने सुविधाको लागी व्यक्तिगत साइड पर्खालहरू तहमा राख्न सकिन्छ। तिनीहरू भारी भारको लागि विशेष रूपमा उपयुक्त छन् Carts ठोस रबर टायरमाथि।
Carts तहका लागि
एक धेरै विशेष निर्माण हो Carts, जो एक साथ बोल्नु र खुला छ, केहि buggies को समान। जोडहरू भन्दा बढि, फलामको ढुङ्गाहरू बाघमा पर्छन्, भित्री प्यानल नरम तर बलियो बनाइन्छ र यसैले टुक्रा गर्न सकिन्छ।
फायदा: यो कारमा धेरै राम्ररी लाग्न सक्छ र आवश्यक पर्दा केही ह्यान्डलहरूसँग बनाइन्छ। यो यात्राहरु को लागि त्यहि आदर्श हो जहाँ तपाईं केवल गाडी संग यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा यो यात्रा मा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरु लाई परिवहन गर्न तपाईं संग छुट्टी मा जान सक्छ।
Carts छत वा छत संग
यो सधैं यात्राको लागि सही मौसम होइन। त्यसपछि Carts छत आदर्शको साथ, खासकर जब बालबालिकाहरू चालु हुन्छन् वा वा पनि सामानहरू गीला हुँदैनन्। साथै, एक छत न केवल बारम्बार, तर धेरै धेरै सूर्यबाट पनि सुरक्षित गर्दछ। केहि मोडेलहरुमा उपलब्ध छ कि छतहरु या डाकू सामान्यतया हटाउन योग्य हुन्छन् ताकि उनि एक हुड जस्तै आवश्यक को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जब खरीद गर्दै Bollerwagens एक निर्णय गर्ने भावना अब आवश्यक छ। निर्णायक उद्देश्य भनेको उद्देश्य भनेको मुख्य उद्देश्य पूरा हुनेछ।
आपूर्ति र निर्माणको Bollerwagens
तपाईं हार्डवेयर स्टोर वा बगैचा केन्द्र मा "सारा" मा Carts को क्लासिक किन्न गर्दा, धेरै प्रस्ताव "किट" को रूपमा वितरित छन् जो अहिले उपलब्ध छन्। यहाँ एक सानो कारीगर कौशललाई बक्समा रहेका वस्तुहरू मध्ये एक बनाउन आवश्यक छ Carts निर्माण गर्न। मुख्यतः Carts आजको अनलाईन अवस्थामा।
तर चिन्ता नगर्नुहोस्, परीक्षणले देखाउँछ कि निर्माण पुस्तिकाको माध्यमबाट, हरेक मोडेल टामेन द्वारा बनाइयो। यो प्रायः धेरै बुझ्न योग्य छ र केहिसँग पनि उपकरण समावेश छ। केही Carts अझै पनि अनुसार कार्य प्रयास र साँचो प्लग-इन सिद्धान्त छेउमा भागहरु जमीनमा सही क्रम प्लग जो, र यसरी परस्पर छन् एक ट्रली।
मूल्यको प्रदर्शन अनुपात Carts
निस्सन्देह त्यहाँ मूल्य मतभेदहरू साथै विभिन्न गुणहरू छन्। सरल मोडेलहरू 50 यूरो वरिपरि मात्र खर्च गर्दछ। सामग्री र प्रसोधनमा ध्यान दिनुहोस्। यो किनभने कार स्थिर स्थिर लोहा ट्यूब हुनु पर्छ, साथै यसको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न यथार्थ यथार्थ काठ को हुनुपर्छ। यस्तो छत, छत वा Sitzbänke- र तकियों रूपमा सेवा स्वाभाविक मूल्य उठाउनु, तर जब तपाईं उनलाई जसरी पनि आवश्यक र थप किन्न छैन सार्थक, केही परिस्थितिमा छन् हुनेछ। तथापि, तिनीहरू सामानको रूपमा पनि उपलब्ध छन् र केहि समय पछि कार पुन: प्रयास गर्न सकिन्छ।
सुरक्षा र उपयोग को आसानी Bollerwagens
जब यो मोडेलको निर्णय गर्ने निर्णय गर्नुपर्दा, एउटा ठूलो भूमिका खेल्दछ, जुन मुख्य रूपमा यसको साथमा छ। त्यसैले बच्चाहरूका लागि हो Carts हवाइजानाको साथमा राम्रो हुन्छ, किनकि तिनीहरू वोल्लगम्मी भन्दा राम्रो वसन्त हुन्छन्। तथापि, यदि तपाईं केहि संकेतित वा तीव्र गतिमा चलाउनुहुन्छ भने तिनीहरू सजिलै सजिलै तोडिएका छन्। यी कारहरुमा हावा पंप को सामान मा हुनु पर्छ।
प्रयोगकर्ता सान्त्वना पनि विचारको कुरा हो। चाहानुपर्छ वा एक हुनुपर्दछ Carts प्राय: कार यातायात संग, मोडेलहरू स्वाभाविक रूपमा पहिलो छनौट सँगसँगै गुना हुन्छन्। अर्कोतर्फ, तिनीहरू कम स्थिर र लोड-असर हुन्।
कितनी चार्ज अनुमति दिइएको छ मोडेलमा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया सामान्यतया 70 100 किलोग्राममा हुन्छन्, विशेष गरी बगैचाका लागि विशेष मोडेलहरू छन्, जुन 150 किग्नको लागि सिर्जना गर्दछ। अपवादहरू अझ बढी।
एक फायदा Bollerwagens
अविश्वसनीय फाइदाहरू मध्ये एक छ कि परम्परागत गाडी को लागी सजिलो र बहुमुखी छ। यसको अतिरिक्त, यसको एक अपेक्षाकृत ठूलो लोड भोल्युम भोल्युम छ। पाङ्ग्राहरू एकदम व्यापक छन्, जो पनि यो सुनिश्चित गर्दछ कि कार कुनै न कुनै इलाके मा डूबने छैन। फोल्डयोग्य मोडेलको फाइदा यो छ कि तिनीहरू सँगसँगै लैजानुपर्छ। निश्चित मोडेलको अवस्थामा, स्थिरता उच्च छ र यसैले लोडिङको संभावना पनि छ।
एक को नुकसान Bollerwagens
तर Carts पनि हानि छ। यसैले कसैले यो तथ्यलाई गिनर्छ कि तिनीहरू खराब रूपमा प्रशोधन गरिएका छन्, विशेष गरी कम मूल्यको मोडेलका लागि। ठोस रबडका पाङ्ग्राहरू आंशिक रूपमा अपेक्षाकृत उच्च छन् र निश्चित रूपमा निश्चित मोडेलहरू पनि ठूलो हुन्छन्, त्यसैले तपाईंलाई यसको लागि ठाउँ चाहिन्छ। को Carts गेराज मा एक "पार्किंग" को आवश्यकता छ वा शेड। फोल्डयोग्य मोडलहरूसँग यो नुकसानलाई दिइएको छैन, तर तिनीहरू कम स्थिर छन् र "ले" धेरै सक्दैनन्।
Cartsपरम्परागत बनाम सुपर कार
काठको कार्टका "पुरानो" मोडेलहरू अझै पनि उचित छ। तर, फैंसी पार्ट्सहरू छन्, उचित सुपर-Carts, जुन बच्चाहरु को लागी एक सानो गाड़ी जस्तो लाग्दछ। दुईका फाइदाहरू र हानिहरू के हुन्?
फोल्डयोग्य मोडहरूका फाइदाहरू स्पष्ट छन्: कार यात्राको लागि, यात्राको लागि, छुट्टीमा वा समुद्र तटमा। पिक्स्ड स्टील फ्रेम स्थिर छन्, सतहहरू पलिएस्टरबाट बनाइएका छन्, त्यसैले तिनीहरू तुरुन्तै र हल्का छन्। केहि मोडेलहरू उच्च गुणस्तरका छन् र विभिन्न असबाब संग सुसज्जित छन्, किनकि यी कारहरू मुख्यतः बालबालिका वा जनावरहरू टेलिभिजन गर्दै छन्।
जस्तै सामानहरू थोरै छन्, सूरजको छतहरू र जस्तै। धेरै मोडेलहरू पार्किङ ब्रेक छन्, त्यसैले तपाइँ आराममा आफ्नो कार पार्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अग्रणी निर्माताहरू छन्, जसले उपकरणमा एक-अर्कालाई पारस्परिक रूपमा पार गर्दछ।
काठ को मोडेल अझै पनि उनको सरल डिजाइन मा उपलब्ध छ, तर उच्च गुणवत्ता र आरामदायक पनि। तिनीहरू काठ र इस्पातबाट बनाइएका छन् - पछि सामान्यतया रंगमा चित्रित हुन्छ, काठ प्राकृतिक छ। यो, निस्सन्देह, एक अद्वितीय एक सिर्जना गर्न लागी लागू गर्न सक्छ, जो विशेष गरी बच्चाहरु लाई मनपर्छ।
प्राविधिक चालाक सामान्यतया कम छ धेरै ब्रेकहरू छैनन्, र पनि कुशन वा छतहरू प्राय: बेकारमा देख्न सकिन्छ। तथापि, त्यहाँ साँचो लक्जरी कारहरू छन्, जहाँ तपाईसँग 200 यूरो वरिपरि मूल्यहरूसँग गणना गर्नु पर्छ।
तपाईबाट के गर्नुपर्छ Carts को लागि बाहिर हेर्न?
हुनुपर्छ Carts यो पहिले धेरै सोच गर्न सार्थक छ। उदाहरणका लागि, आकार र पहने पहने। तर यो पनि चाहे नक्कल वा "सम्पूर्ण" मा। यदि काठ को एक मॉडल को उपयोग गरिन को लागी, केवल बाद मा प्रश्न मा आउनेछ।
निस्सन्देह, यो कसरी गुणवत्ता मा देख्न एक भूमिका खेल्छ। यदि तपाइँ बालबालिकामा मुख्यतः राख्नु चाहनुहुन्छ भने, गुणस्तर र कर्तव्य सेवा भन्दा बढी छ Carts मुख्यतः बियर बोटहरू वा बगैंचाको बर्बर ढुवानी।
अर्को दृश्य मूल्य हो। यो कम से कम गुणस्तरसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ। A राम्रो तरिकाले प्रसोधित कार कार तल्लो मूल्य सेक्शन मा तदनुसार भेट्नु पर्छ।
यो इकट्ठा भएको बेला कार निरीक्षण गर्न पनि योग्य छ। त्यसपछि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि पट्टी पट्टी कसरी कति सजिलो छ, चाहे कुञ्जीहरू अक्षहरूमा फैलिएको छ र चाहे सजिलो हुन्छ।
केहिको छोटो चित्र Carts
हामी केहि मोडेलहरू र तिनीहरूका फाइदाहरू र हानि पेश गर्न चाहन्छौं।
FUXTEC Carts सूर्यको छत संग
Beachtrekker जीवन Carts
Mendler Oliveira Carts र अन्तमा
डी एन्ड एस सेल्स Carts.
Sonnendach संग Fuxtec संग शुरू गरौं। यो एक चित्रित इस्पात ट्यूब देखि बने एक मोडेल हो। यसको लम्बाई समायोजन, लचीलो बाह्य छाला र बल-असर वायु टायरको साथ मोडेल स्कोरहरू। यसको अतिरिक्त, यो कारमा प्याडिंग छ। यो केवल 12 किलोग्राम भारी छ, तर यो केवल "मात्र" 70 किलोग्राम संग लोड हुन सक्छ। एक अतिरिक्त रूपमा, निर्माताले एक लिङ्ग थैला र एक रूपान्तरित शीर्ष प्रदान गर्दछ (वितरणको दायरामा समावेश र एक सहायकको रूपमा पनि उपलब्ध)। मूल्य मिडफिल्डमा छ: लगभग 150 यूरो तपाईले खर्च गर्नु पर्छ।
अर्को, Beachtrekker जीवन मा एक नजिक को देखो Carts, यो नियमित रूपमा प्रयोगकर्ताहरूले प्राप्त गरेको छ, विशेष गरी स्थायित्व र प्रशोधन सम्बन्धी। यसमा काठ र धातुको हुन्छन् र सम्पूर्ण 100 किलोग्राम सार्न सक्षम हुने फाइदा छ। उहाँले आफैलाई 16 किलोग्राम पनि पनि छ, तहयोग्य तर त्यसो त धेरै गाह्रो छ। चूंकि फ्रेम पाउडरकोटेड छ र चित्रित छैन, यो लामो शेल्फ जीवन सम्भव छ। कारमा प्याडिंग छ र हावा टायर्स संग सुसज्जित छ। यदि बच्चाहरू यसको साथ संचालित हुन्छन् भने, यो कार धेरै सहज छ। सकारात्मक ठूलो आन्तरिक हो। साथै एक राम्रो ड्राइभिङ भावना प्रशंसा गरिएको छ। मूल्य, तथापि, लगभग 300 यूरो मा गर्व पनि।
सम्भवतः सस्ता क्लासिक, एक मिन्डलर ओलिइरारा हो Carts काठबाट बनेको यो पनि 150 किलोग्राम ले स्पेसबाट सार्न सक्छ। यसको वजन पूर्वभन्दा बढी भन्दा बढी छ - सम्पूर्ण 17 किलोग्राम ब्यालेन्स हो। तर किनकि त्यो मात्र संचालित र यो क्षेत्र द्वारा संचालित छैन, यो कमी नगरी छ। इस्पात ट्यूब फ्रेम दुई तरिका मा चित्रित छ र एक विशेष विशेषता को रूप मा निर्माता निर्माता टायर को एक अनुकूल अनुकूल उत्पादन बताछन। कारले समग्र स्थिर धारणा बनाउँछ, जुन प्रयोगको समयमा पनि पुष्टि गर्दछ। साथै, यो धेरै भन्दा बढी 50 यूरोको साथ धेरै सस्तो छ र यो असहज खरीदा जब सङ्कलन गर्न सजिलो छ।
उपस्थितिको सन्दर्भमा, डी एन्ड एस बिक्रीबाट "वैगन" विशेष गरी सुन्दर छ। यहाँ, तथापि, तपाईंलाई प्रशोधन र स्थायित्वमा कटौती गर्नु पर्छ। यो Carts काठ को हुन्छन् र 150 किलोग्राम संग लोड गर्न सकिन्छ। हावा टायरले यसलाई सहज बनाउँछ, इस्पात ट्यूब फ्रेमले स्थिरता प्रदान गर्दछ र तपपुलिन डिसेबल योग्य छ।
यी निर्माताहरू तिनीहरूको लागि जिम्मेवार छन् Carts ज्ञात
निम्न कम्पनीहरू उत्पादनको लागि जिम्मेवार छन् Carts र हाम्रो नजिक अझ नजिक हेर्नु पर्छ:
Fuxtec उच्च गुणवत्ता वाला एक निर्माता को रूपमा मानिन्छ। को Carts लचीला र तहयोग्य र राम्रो तरिकाले प्रसोधित हुन्छन्। मूल्यहरू अझ धेरै उच्च छन्, तर यो दीर्घकालीनता र गुणवत्ताको वर्णन गर्न र यसका लागि वर्णन गरिएको हो।
Puky विशेष डिजाइन मा केंद्रित छ। गतिशीलता यहाँ दिइएको छ, जसको कारण कारहरू मुख्य रूपमा शहरको लागि डिजाइन गरिएको छ। विभिन्न आकार र सामग्रीहरू बनाइएका छन्, काठका कार्टहरू र तिनीहरूका प्लास्टिकहरू। साथै यहाँ मूल्य पूर्ण रूपमा ठीक छ।
Mendler को लागि खडा छ Cartsबच्चाहरु को लागि आदर्श हो। त्यसकारण, त्यहाँ भिन्नताहरू छन् जसमा सीट एकीकृत छ। छत सहायकको रूपमा उपलब्ध छ र आवश्यक भएमा स्थापना गर्न सकिन्छ। कारहरू काठ वा प्लास्टिकबाट बनाइएका छन्। यस निर्मातासँग आकार र मूल्य फरक छ, खरीदार छनोटको लागि खराब छ।
देउवा Carts बलियो र मौसममा ठिकिएको छ। निर्माताको धेरै मोडेलहरू तहयोग्य छन्। त्यहाँ पनि सामानको रूपमा छतहरू छन् र केही साथीहरू प्रतिस्पर्धा भन्दा अधिक मोहक हुन्छन्। पक्कै पनि तपाईलाई अनुमति दिईएको भारमा ध्यान दिनु पर्छ, पहिले Carts चयन गरी खरिद गरियो।
तिनीहरूलाई विशेष रूपमा ठोस मानिन्छ Carts को Pinolino। केहि मोडेलहरू विशेष गरी बालबालिकाको परिवहनका लागि डिजाइन गरिएका छन्। कारीगरी उच्च गुणस्तर हो, यद्यपि कारहरू शीर्ष मूल्य खण्डमा सारिदैनन्। यद्यपि, मूल्यहरू तीन अंकहरू छन्।
निस्सन्देह, त्यहाँ अन्य निर्माताहरू छन् Carts, जो राम्रो र लचीला साथीहरू उत्पादन गर्दछ। उदाहरणको लागि Rosilino Turino र Hudora। यदि तपाइँ विशेष गरी पैदल यात्रा र ट्रेकिङ भ्रमणको लागि कार राख्न चाहानुहुन्छ, माउन्ट ब्वाइको एउटा मोडेल निश्चित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर हिडिंग वागोनका कार समुद्र तटको लागि धेरै उपयुक्त छन्। कुनै कुरा के तपाईं छनौट गर्नुहुन्न, तपाईलाई पैसाको लागि राम्रो मूल्यमा ध्यान दिनुपर्छ।
को इतिहास Carts
व्हीलका आविष्कार पछि तुरुन्तै मान्छेद्वारा विभिन्न आकारका हात-कार्टहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। तर Carts, अपेक्षाकृत सानो र कम-वैगन अधिक वायवीय टायरको साथ, सधैं हात ट्रक बीच एक विशेष सुविधा रहेको छ। शब्द वास्तवमा सुरक्षित गरिएको थिएन, कसैले मान्न सक्छ कि नाम यस तथ्यबाट आउँछ कि कारहरू त्यस साधारण फर्श र पथहरूमा एक छातीको आवाज बनाउँथे। Siegfried Thurmann ले 2007 को लागि एक पेटेंट को लागि मात्र आवेदन गरेको छ, जो मुख्य रूप देखि खुट्टा को टिपिंग को कारण हुन्छ, जो विशेष रूप देखि महत्वपूर्ण छ जब बच्चाहरु संग यो संचालित गरिन्छ।
der Carts एक धातु फ्रेम शामिल थियो, जो काठ संग चढाईएको थियो। यस्ता मोडेलहरू क्लासिक हुन र आज पनि उपलब्ध छन्। केहि क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी ग्रामीण इलाकामा वा द्वीपमा ड्राइभिङ्ग प्रतिबन्धहरूसँग, तिनीहरूले अझै पनि लोड ट्राफिकको लागि तिनीहरूको महत्त्व छ। तर विशेष गरी साइकलहरूमा, बुबाको दिनका गतिविधिहरु र मनपर्ने, तिनी अक्सर यातायातको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
der Carts सांस्कृतिक इतिहासको एक सही टुक्रा हो। भारी भार लिने क्रममा, वैगनहरू उनीहरूको आविष्कार वा थप विकासको कारण लोकप्रिय सहयोगी थिए, जुन चाँडै कसैले पनि कुनै पनि सम्झना गर्दैन। यस ट्राफिक प्रकारले दोस्रो विश्वयुद्धमा उडान र निकासीको सम्बन्धमा मुख्य भूमिका खेल्न थाल्यो। किनकी लगभग हरेक परिवारको यस्तो कारको स्वामित्व भएकोले, तिनीहरू प्रायः सानो बच्चाहरु र केहि बाँकी सामानहरू परिवहन गर्ने एकमात्र तरिकाको रूपमा देखिएका थिए।
अरू के भन्न को लागी Carts
जो पनि पर्यावरणको पहलुहरु मा विशेष रुचि छ प्रसोधन र सामाग्री को लागि सोध्नु पर्छ। केही निर्माताहरूले विशेष गरी अनुकूल अनुकूल उत्पादनहरूको साथ विज्ञापन गर्छन्। कसलाई Carts जो पक्षहरूमा काठको बनाइएको छ, जाँच गर्नुपर्छ वा कच्चा हुन्छ कि छैन। कच्चा अवस्थामा उपचार वार्निश वा वार्निशसँग उपचार गर्नु पर्छ। लाकक्वार्ड काठको स्थितिमा, त्यसो भए पनि कार दिन सक्ने व्यक्तिले टच गरेर वा ब्रश गर्न सक्दछ - सम्भवतः बच्चाहरू पनि। काठ को कुनै पनि मामला पर्यावरणीय प्रभाव देखि संरक्षित हुनु पर्छ। यसैले काठ को कट किनारहरू महत्त्वपूर्ण छन् र छाप्न सकिन्छ।
हालको वरिपरि नियमित ट्यूनिंग दृश्य छ Carts विकास गरे। उनको नाम "पिम्प मेरो।" Carts"र किशोर किशोरहरूले चलाएको छ जसले आफ्ना साथीहरूलाई उनीहरूको पेयको लागि आकस्मिक गाली राख्छ।
जो केहि को लागि Carts सदाको रूपमा लोकप्रिय छन्, आज पनि प्राय: लोड परिवहन को राम्रो र सजिलो तरिका हो। सबै मा, तिनीहरू लोकप्रिय छन् र विभिन्न कम्पनीहरु द्वारा उत्पादित छन् जो ग्राहकहरु को पक्ष मा खोज्दै छन्। अनलाइन तर खुदरा व्यापारमा पनि धेरै फरक मोडेलहरू छन्, जुन फरक फाईलहरू छन्।
एक कार्ट रमाईलो, व्यावहारिक र प्रयत्नको एकदम व्यापक दायराको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गुणवत्तामा उच्च गुणस्तरको सामग्री र एक राम्रो संभाला पट्टी पट्टी समावेश छ।
EASYmaxx पुर्खाहरूले दिन, किनमेल, Foldable ट्रली लागि Foldable टायर, कवर संग एक छत बिना Carts एक्सल र फ्रेम प्रबलित - क्षमता: 80KGAnzeige
आसान निर्माण: केहि सरल चरणहरूको साथ सेकेन्डमा निर्माण वा फोल्डर। आकार खुला: 100 50 एक्स एक्स 61 सेमी, जोडेको 51x20x76cm (LxWxH) प्लेटफर्म 89x47cm (2 लागि पर्याप्त पेय बाकसभित्र)
RAUMWUNDER: 80kg एक कार्गो क्षमता र 89x47cm एक लोड क्षेत्र संग तपाईं आफैलाई तिहार गर्न लामो दूरी बचत गर्न सक्नुहुन्छ! बुबाको दिन र पुरुषको भ्रमणको लागि बिल्कुल सही। 13 बैरल सम्मको लागि 5L बियर! माछाको लागि पनि उपयुक्त छ किनकि अफ्रोइड प्रबलित टायरको लागि धन्यवाद। Incl। अगाडि दुई अतिरिक्त बोतल धारकहरू
अत्यन्तै स्थिर: मजबूत र हल्का फ्रेम पाउडर-लेपित ट्यूबलर इस्पात बनेको - मजबूत, मौसम प्रतिरोधी, सजिलो-हेरविचार आवरण बगैंचामा उद्योग देखि प्रिमियम अक्सफोर्ड ऊतक को गरे। सफा गर्न, पानी-विकर्ण र भारी-कर्तव्य सजिलो
धेरै ट्याब्लेट र अफगानिस्तान बन्द: धन्यवाद दूरबीन ह्यान्डल कुनै पनि आकारको आकारको लागि उपयुक्त। अन्य ह्यान्डकोर्ट ट्रकहरूको विपरीत, सबै चार पाङ्ग्राहरू 360 ° घुमाउन योग्य छन्, ट्रली अत्यन्त मनमोहक र बहुमुखी बनाउन
सबै अवसर लागि: या सुविधा हुनेछ आफ्नो दैनिक किनमेल सपिङ्ग, शिविर, picnicking, बागवानी, खेलकुद, माछा मार्ने, समुद्र तट, वन, भू-भाग, Kindertransport सीट बेल्ट, ठंडा झोला, वर्षा कवर, तिहार वा EASYmaxx Carts को पिउने भ्रमण बिना
Fuxtec फोल्डेबल कार्ट FX-CT500 खरानी छाना, अगाडि ब्रेक, ठोस रबर टायर, पछाडि झोला, बच्चाहरूको लागि उपयुक्त - मूल GS- प्रमाणित गुणवत्ताको साथ मूल!
दोहोरी अगाडि ब्रेकको साथ सीटी सीरीजको शीर्ष बिक्रेता, यूभी-संरक्षित सनरोफ, भण्डारणको लागि ठूलो रियर जेब र टाढाको टाढाको रोड - CT500
Foldable वैगन रबर टायरहरूमा Chrome पहाइहरूसँग GS-seal सँग मात्र विगनको लागि उपयुक्त !!!
खींचने को लागि टेलीस्कोप रड, पनि तह राज्य मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। फोम-प्याडर्ड तल सम्मिलित गर्नुहोस्, बालबालिकाको यातायातको लागि प्याडिंग सुरक्षाको साथ सबै क्रसबारहरू
स्थिर स्ट्यान्ड हुँदा र अहिले सम्म 15 सीसी चौडा हुन्छ; पूर्णतया भेला भयो: अनप्याक गर्नुहोस्, खाली गर्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस्
वैकल्पिक सामान उपलब्ध: वर्षा टोपी, सीट बेल्ट, हावा तकिया मैट
कुराकानी पोइन्ट जर्जेस ह्यान्ड ट्राली, बगैंचा ट्राली, ह्यान्डकार्ट, यातायात ट्राली 550० किलोग्राम भारसम्म - वायमेटिक टायरहरू - हटाउन योग्य भित्री तिरपाल प्रदर्शन
550kg पेलोड सम्म स्टिल रिममा ठूला, बल-बेयरिंग र एयर-टायर्ड प्रोफाइल पाels्ग्राहरू उपकरणहरू र साना भाँडाहरूको लागि स्थिर, हटाउन योग्य भण्डारण
घर, बगैंचा, चाडपर्वहरु, क्याम्पिंग आदि को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ बलियो, हटाउन योग्य भित्री तिरपाल (धुने योग्य) पनि बोक्ने इकाईको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
घर, बगैंचा, चाडपर्वहरू, क्याम्पि etc. आदिको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
छिटो खोल्ने वा हटाउन को लागी पक्ष को लागी द्रुत रिलीज हटाउन योग्य, प्याडेड ह्याण्डल र पुल रडमा पार्टि part्ग भाग
लन ट्र्याक्टरहरूको लागि ट्रेलरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि हटाउन योग्य ह्यान्डल र कपलिंग पार्टलाई धन्यवाद
SAMAX Bollerwagen ह्यान्ड ट्रली गार्डन ट्रली समुद्र तट कार Foldable Foldable Carriage डली - कालो / ओरेंज सूचक
समग्र आयाम: लगभग। 107 एक्स 48 एक्स 50 सेमी (LxWxH) ह्यान्डल लगभग। 117 सेमी उच्च, व्यास पहिए लगभग। 17 सेमी
आयामहरू आकार: लगभग। 17 एक्स 50 एक्स 77 सेमी (TxBxH)
Foldable - यसरी भण्डार गर्न सजिलो छ
अधिकतम। लोड वजन: 80 किलो, वजन वैगन: लगभग 10,5 किलो
सामाग्री: 100% पलिएस्टर incl। सुरक्षात्मक कवर, प्रबलित धातु फ्रेम
Fuxtec Foldable ट्राली FX-CT700 छाना, अगाडि र रियर व्हील ब्रेक, ठोस रबर टायर, पुश बार, बच्चाहरु को लागी उपयुक्त संग फोल्डेबल - मूल!
सीटी सीरीजको मुख्य उत्पादनको साथ अगाडि र पछि ब्रेक, यूभी-संरक्षित सनरोफ र धक्का पछाडिको रियर - CT700
बच्चाहरूको लागि उपयुक्त रबर टायरमा Chrome पाङ्ग्राहरूको साथमा फोल्डयोग्य कार्ट
खींचने को लागि टेलीस्कोप रड, पनि तह राज्य मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। वैकल्पिक सामान उपलब्ध: वर्षा टोपी, सीट बेल्ट, हावा तकिया मैट
फोम-प्याडर्ड फ्लोर सम्मिलित, बालबालिकाहरूको यातायातको लागि प्याडिंग सुरक्षाको साथ सबै क्रसबारहरू
केसर ट्राली capacity tr० किग्रा बगैचा ट्राली यातायात ट्राली बगैचा कार्ट हटाउन योग्य टार्पलिन उपकरण ट्राली हात ट्राली बहुमुखी प्रयोग
KESSER ट्राभल ट्रॉली बहुमुखी प्रयोगमा छ, उदाहरणको लागी एक वैगनका लागि, ट्रान्स ट्रेलको रूपमा, बगैंचामा उपकरण ट्रली वा लान ट्रयाक्टरको ट्रेलरको रूपमा।
छिटो रिलीङ हङ्ड्ड र पूर्ण रूपमा हटाउने योग्य प्यानलहरू धन्यवाद, KESSER ट्राभल ट्रलीले कुनै पनि समयमा प्लेटफार्म ट्रेलरमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ।
सजिलो लोडिङ र अनलोड गर्नको लागि साइड भित्रीहरू तल फाल्न सजिलो छ।
असामान्य इलाकामा पनि, इस्पात पहिएहरूमा वायु-थकित र बल-असर प्रोफाईल पाङ्ग्राहरू बेस्सन्देही खींच्ने सुनिश्चित गर्छन्।
- घर, बागवानी वा निर्माण स्थलहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ - बल-असर वायवीय टायरहरू प्रोफाइल पाङ्ग्राहरू - कार्गोलाई अलग गर्न वा अतिरिक्त लिने इकाईको रूपमा हटाउन सकिने ट्रे - ड्र्यागबारमा डिस्पोजेबल ह्यान्डल र युगल
रैमरोक्स X 34185१100 काठको कार्ट ह्यान्डकार्टले कभर वैगन ह्यान्डकार्ट १०० किलोग्राम सम्म प्रदर्शन
राम्रोक्सएक्स काठ हात ट्रॉली - आयाम (LxWxH): 95x61x59 सेमी - - यो हात ट्राली बगैचामा वा हिंड्दा एकदम व्यावहारिक सहयोगी हो। १०० किलो भारित क्षमताको साथ, यो धेरै बहुमुखी छ। - - - महान कारीगरी (मूल रैमरोएक्सएक्स) - एयर भरिएको टायर (आकार १० "x100.००) सहज चालनको लागि ड्राइभिंगका लागि - - टुक्रा टुक्रा गरेको काठ, कुनै स्प्लिटरहरू - - एन्टि-स्लिप ह्यान्डलहरूको साथ आरामदायक पुल रड - - सजिलो असेंब्ली -
विश्वव्यापी रूपमा लागू
नयाँ र मूल प्याकेजि।
पिनोलिनो फोल्डिंग वैगन पक्सी, फोल्डेबल, Inc. सनरूफ, टेल ब्याग र क्यारी ब्याग, पीयू टायर, लोड क्षमता kg० किलोग्राम, खैरो डिस्प्ले
फोल्डेबल ह्यान्डकार्ट 'पक्सी' सूर्यको छानाको साथ, बोरा र पुच्छरको झोला बोक्ने। धातु फ्रेम: 100% PU बाट बनेको कालो, खैरो कपडा। आयाम एल १२124 x डब्ल्यू x H x एच roof 59 छत १०२ सेमी, वजन ११ किलोग्राम, भार क्षमता kg० किलोग्राम, वस्तु नम्बर। 67
ह्यान्डकार्टलाई केही सरल चरणहरूमा खाली ठाउँ बचत गर्न सकिन्छ। व्यावहारिक बोरा झोलामा राखिएको, यो सजिलैसँग केवल ११ किलोग्रामको भारसँगै बोक्न सकिन्छ र सानो ट्रंकमा पनि फिट हुन्छ।
ठूलो लोडि load क्षेत्रको अतिरिक्त (L W 86 x W x 43 x H २ cm सेमी), अवस्थित टेल ब्यागले सबै महत्त्वपूर्ण यात्रा साथीहरूको लागि थप भण्डारण ठाउँ प्रदान गर्दछ। फोल्डेबल ह्यान्डकार्टमा लोड सिधा सूर्य प्रकाशबाट सुरक्षित छतलाई धन्यवाद छ
इस्पात अक्ष र PU टायरको साथ, फोल्डिंग कार्ट सबै मार्गहरू र समुद्री तटको लागि पनि उपयुक्त छ। कडा पुल रडले ट्रालीलाई तान्न र चलाउन सजिलो बनाउँछ। पिनोलिनो कढ़ाई एक अतिरिक्त नेत्र-क्याचर हो
पिनोलिनोले १ 1997 10 since देखि बच्चाहरूको सपनाहरू पूरा गर्दै छ र बच्चाहरूको फर्निचर, सामान र खेलौनाहरू बेच्छ। जर्मन कम्पनीले केवल बच्चाहरूका लागि उपयुक्त वार्निश, ग्लाज र तेलहरू प्रयोग गर्दछ, डीभीएसआईको एक सदस्य हो र १० बर्षको पिनोलिनो-प्लस ग्यारेन्टी दिन्छ।
राम्रोक्स एक्सएनएमएक्स बगैंचा यातायात फोल्डिंग कार्ट हात कार्ट फोल्डिंग कार्ट फोल्ड 34161kg निलो सूचक
रैमरोएक्सएक्स - फोल्डेबल ह्यान्डकार्ट / वैगन - हटाउन योग्य जेबको साथ - निलो
आयाम: - समग्र आयाम: L: x ० x W: x२ x H: cm 90 सेमी - लोड स्पेस: L: x० x W: x 52 x H: cm० सेमी - फोल्ड अप: L: २० x W: x२ x H: cm cm सेमी - ड्रबर: एल: cm 64 सेमी - टायर व्यास: १ .80।। सेमी - टायर चौड़ाई: width सेमी - कुल वजन: करीव १० किलो - अधिकतमसम्म पेलोड। Kg० केजी - वाणिज्य प्रयोगको लागि हैन (उदाहरणका लागि अखबार, ब्रोशर होल्डर)
ट्यूबलर स्टील फ्रेमको साथ बलियो र उच्च-स्तरीय कारीगरी - अगाडि पाels्ग्राहरू 360 ° घुमाउन योग्य छ - त्यसैले सानो स्थानमा एकदम चतुर - सहज चलिरहेको रबर व्हीलहरू - यी नरम अंडरकट्समा पनि स्थिर स्थिति प्रस्ताव गर्दछ - एक्सएनयूएमएक्स केजी भारसम्म उच्च भार क्षमतासहित - झोला हटाउन सकिन्छ र सफा गर्न सजिलो छ - केहि सजिलो चरणहरूमा पटहरू - त्यसैले स्टो गर्न धेरै उपयुक्त - नयाँ र मूल प्याकेजिaging
ब्रेकका साथ सेकी फोल्डेबल ह्यान्डकार्ट फोल्डेबल ह्यान्डकार्ट ट्रान्सपोर्ट ट्राली गार्डन ट्रेलर गार्डन ट्राली ट्रान्सपोर्ट ट्राली 80० केजीसम्म, घुमाउन सकिन्छ ° 360० डिग्री, ग्रे ग्रे डिस्प्ले
Sekey: Sekey मा हामी एक ग्राहक संचालित कम्पनी हो जुन अत्यधिक विशेष र स्टाइलिश आउटडोर उत्पादनहरू उच्च स्तरमा विकास गर्न प्रतिबद्ध छ। यद्यपि हामीले वर्षमा 2016 मात्र शुरू गर्‍यौं, हाम्रो ब्रान्ड सेकी पहिले नै युरोपभरि छाता, कार्ट, गाजेबोस आदि बाहिरी उत्पादनहरूका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्डमध्ये एक भएको छ। Sekey भनेको FASHION, QUALITY र LUXURY को हो!
दूरबीन ह्याण्डल संग बहुउद्देशीय आउटडोर ट्रली: डबल ब्रेक संग प्लास्टिक पाङ्ग्रा ठोस धन्यवाद, दुई सामने पाङ्ग्राहरु 360 ° द्वारा घुमाउन सकिन्छ। कारसँग सहज संभालको लागि समायोज्य ह्यान्डल छ। कार धेरै सतहहरूमा नियन्त्रण गर्न सजिलो छ र बागवानीको लागि उपयुक्त, क्याम्पिङ, किनमेल, माछा र अन्य धेरै।
सजिलो स्थापना र भण्डारणको साथ उच्च गुणस्तर तह कार्ट: हाइङ्ड फ्रेम निर्माणको लागि धन्यवाद, सेके कार्ट धेरै सजिलो छ र सेट अप गर्न र टाँस्न उपयुक्त छ। टोकरी टिकाऊ 600D ओक्सफोर्ड कपडाबाट बनेको छ, जुन सफाईको लागि सजिलै बदल्न सकिन्छ।
ठूलो क्षमता गाडी मुख्य भाग 80x98x50 सेमी 76 सेमी मापन गर्दछ, लोडिंग क्षेत्र आयाम 101x80x45 सेमी हो, तह आयाम 28 सेमी x 50 सेमी x 20 सेमी स्पेस बचतको लागि हो। नेट वजन लगभग 76 KG र अधिकतम बोक्न सक्ने क्षमता 10,5KG हो।
प्याकेज सामग्री: सेके फोल्डर एक्स 1, उत्पादन गाइड X XUMUM। हाम्रो तह कार्टले 1 वर्ष वारंटीको साथ आउँछ। यदि तपाइँसँग प्रश्न छन् भने, कृपया सोधिने प्रश्न अनुभागमा संकेत गर्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् [इमेल सुरक्षित] हामी 24 घण्टा भित्र हप्तामा वा सप्ताहांतमा 48 घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौं।
अघिल्लो लेखताररहित पेचकस
अर्को लेखबिजुली साइकल